SIDA LOO DOORTO MIRAHA KAABAJKA UGU FIICAN: BARASHADA SHURUUDAHA IYO SIFOOYINKA - NOOCYO KAABASH
Kala duwan ama isku-dhafan
Kala duwanaanta ayaa ah xulashada koox ka mid ah xulashada dhirta, abuurka kaas oo laga iibsan karo dukaamo khaas ah. Seeds ka soo dhirta noocan oo kale ah ayaa laga goyn karaa iyaga u gaar ah, iyo tayada fruiting sii jiri doonaan isla sanad kasta sida in laga bilaabo abuurkii hore ee abuurka la iibsaday.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa ee kaabajka ah waa shaqada falsafada reer Giriiga ee Evdem. - "Ka daawee Dhirta", halkaasoo lagu sheegay in waqtigaas laga bilaabo 4 ilaa 3 kun oo BC. er Giriigtu waxay ku koraan 3 nooc oo kaabash.
Beelaha waxaa la helaa iyada oo la maro noocyo dhowr ah si loo helo dhadhan fiican, cabbirka weyn, caabaq dheeraad ah ee cayayaanka iyo cudurada. Waa wax aan faa'iido lahayn in laga soo ururiyo abuurka dhirta sida guriga, maadaama aanay awood u lahayn dhalashada - waa in lagu iibiyaa dukaamada sannad kasta. Waxaa habboon in la ogaado in labada nooc ee kala duwan iyo dhexjirta ay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda, markaa waxaa lagama maarmaan ah in loola dhaqmo si xushmad leh.
Faa'iidooyinka ay kala duwan yihiin waxaa ka mid ah:
aan qabin xaalad sii kordhaysa;
caabbinta isbeddelka heerkulka;
sicir hoose iyo suurtogalnimada abuurka is-goosashada ee beerista sannadlaha ah.
By xumada waxaa ka mid ah:
u fidinta cudurrada dhaxalka;
iska caabinta saboolka fungal iyo cudurada viral;
inta badan kaabashka ma ahan kuwo ku xiran kaydinta muddada dheer;
Faa'iidooyinka Beelaha waxaa ka mid ah:
dhalidda sare iyo mid deggan;
caabbinta ugu badan ee cudurada iyo cayayaanka;
cabbirka isku midka ah ee waaweyn;
wakhtiga kaydinta adigoon waxba ka beddelin muuqaalka iyo dhadhaminta.
Dhibaatooyinka kala duwan ee Beelaha waxaa ka mid ah:
dalbashada xaaladaha ciidda iyo cimilada;
baahida loo qabo dhar joogto ah (waxsoosaarka tayo sare leh);
sicirka aadka u sarreeya, marka la eego inaad u baahan tahay inaad iibsato miraha sanad walba.
Markaad dooranaysid abuurka, waa inaad sidoo kale hageysaa sifooyinka tayada macaamiisha. Tusaale ahaan, kala duwan ee kaabashka ayaa ku habboon salting, iyo Beelaha ku habboon kaydinta muddada-dheer.
Waxaan kugula talinaynaa in aad akhrido waxa dabiiciga ah ee faa'iido leh oo waxyeello u leh, sida loola tacaalo kaabajka guriga, iyo sida loo sameeyo pickles ka soo kaabajka jiilaalka.
Isku xirnaan goboleed
Kala duwan kasta iyo iskudhafka waxaa loo sameeyaa gobol gaar ah oo koraya (ama gobolo badan). Baakada shimbiraha waxaa ku jira macluumaad ku saabsan dhulka ay tahay in la beeray. Haddii aad dayacdo taladan, waxay u badan tahay in kaabajka uusan korin doonin sifooyinka lagu tilmaamay. Iyada oo ku xiran gobolka, isku noocyada noocyada kala duwan ama kaabajka ah ayaa kor u kaca, waxay leeyihiin marxalado kala duwan, sifooyinka tayada ee madaxdu way ka duwan yihiin, si natiijada ugu dhow ee suurtogalka ah ee sawirka iyo sharaxaadda xirmada, si taxadar leh u barto xiriirka goboleed ee mulkiilaha iibsaday.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad akhrido sida ay u koraan geedo kaabajka ah, iyo haddii ay suurtogal tahay in la koro kaabajka iyada oo aan la qaadan.
Sidoo kale baahida loo qabo in lagu doorto abuurka ku-xirnaanta gobolka, waa lagama-maarmaan in la tixgeliyo nooca carrada taas oo lagu talinayo in lagu beero abuurka la helay. Dhammaan macluumaadka ku saabsan tan waxaa lagu muujiyay baakidhka. Tani waa arrin aad muhiim u ah, maadaama ay si toos ah u saameeyso heerka koritaanka, cufnaanta iyo cabbirka madaxa, waqtiga dhadhanka iyo waqtiga kaydinta.
Waa muhiim! Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la tixgeliyo acidity ee ciidda, tan iyo kaabash ma jecla ciidda xoog leh acidic. Qodobkani ma aha mid muhiim ah, wuxuuna u baahan yahay oo kaliya faragelinta aadanaha oo ah qaab daweyn habboon oo waqtigiisa loo fuliyo.
Wixii beerista ee dhulka iyo furan dhulka waxaa sidoo kale lagu talinayaa in ay doortaan abuurka ku haboon. Tababarayaasha madaxa ee hore waxay guud ahaan ku habboon yihiin beerashada aqalka dhirta lagu koriyo, iyo berrin furan - Bisaylkiisa dhexdhexaad ah iyo goor dambe.
Miisaanka iyo qaabka madaxa
Madaxda kaabashu waxay ku kala duwan yihiin cabbirka, qaabka iyo miisaanka, taas oo si toos ah ugu xiran tahay kala duwanaanta kaabajka. Inta badan, kaabajka hore u bislaaday wuxuu leeyahay miisaan yar oo aan gaarin wax ka badan 2.5 kg. Madaxda Kaabashka ma aha mid aad u kala duwan, inkastoo miisaankoodu kala duwan yahay waxayna noqon karaan qiyaastii 4 kg, sida caleemuhu u dhaw yihiin midba midka kale.
Dad badan ayaa raadinaya jawaabaha su'aalahan oo kale: sida loo daryeelo kaabajka ka dib markii laga beerto dhul furan, haddii ay lagama maarmaan tahay in la gooyo caleemaha kaabajka, maxay yihiin xeerarka asaasiga ah iyo caadooyinka ah ee waraabinta kaabajka, iyo sidoo kale sida loo bacrimiyo kaabajka.
Dhibka ugu adag waa kaabajka goosashada, oo leh cufnaanta ugu badan ee caleemo, sidaas awgeed waxay miisaami kartaa 2 (madaxyada ugu yar ee kaabajka) ilaa 15 kg.
Waxay kala soocaan noocyada wareegsan ee wareegsan, wareegsan, wareegsan, wareegsan, iyo qaababka madaxyada. Qaabka madaxu wax saameyn ah kuma yeelanayo tayada alaabta ama muddada kaydinta, waa wax ka mid ah noocyo kala duwan.
Noocyada kaabajka ah ee qaangaarka ayaa loo qaybiyaa:
hore u bislaaday
Biyo goor dambe
Baro tiknoolojiyada beerista noocyada noocyada kala duwan ee kaabajka: Beijing, broccoli, cauliflower, kohlrabi, pak-choi, kale, romanesco, kaabajka cas, savoy.
Cabbirada hore u bislaaday ayaa si gaar ah loogu koray isticmaalka dhakhso ah, taas oo ah, waa in la cunaa sida ugu dhakhsaha badan ka dib goosashada. Kaabashooyinka noocan oo kale ah ayaa loogu talagalay saladhka fitamiin - caleemuhu waa jilcan, jilicsan, kaabajka dabacsan, waxay leeyihiin miisaan yar. Muddada bislaado ee kaabajka hore u bislaaday waa 60-80 maalmood ka dib muuqaalka caleemaha ugu horeeya.
Waa wax aan macquul aheyn in lagu hayo kaabajka noocaas ah: si dhakhso ah ayuu u rogrogaa dabeecadda madaxa kaabajka, waxana uu sidoo kale u nugul yahay inuu dillaaco, taas oo xoojineysa habka sii xumaanaya. Wixii processing, kareemaha sidoo kale ma aha mid ku habboon, iyo haddii daaweyn kulul - Kaabashka si fudud u rogi doonaa Boorash. Waxaa ka mid ah noocyada hore u bislaaday noocyo u bislaaday "Hektar Golden", "Zora", "Rosava", "Yaroslavna", "Nakhodka"; iyo Beelaha dhexdooda - "Aladdin F1", "Westri F1", "Delphi F1", "Transfer F1", "Pharaoh F1", "Express F1".
Kaabashka xilliga-dhexe waxaa loo tixgeliyaa dhexdhexaad ah inta u dhexeysa noocyada hore iyo kuwa dambe. Haddii aan isbarbardhigo kuwa hore, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro dhalid sare, oo ah madaxa cufka kaabajka. Muddada koritaanka iyo dhaqanka ka dib caleemaha ugu horreeya waa qiyaastii 85-120 maalmood.
Faa'iidada kaabajka bartamihii dhexe waa suurtagalnimada in shaqo dheeraad ah iyo waqti dheer kaydinta marka la barbar dhigo Bisaylkiisa hore.
Waxaa ka mid ah noocyada caanka ah ee bartamihii xilli-ciyaareedka ah "Gift", "Glory 1305", "Capital", "Belarusian 455", "Brunswick". Beelaha ugu caansan waxaa ka mid ah "Rindu F1", "Megaton F1", "Menzu F1", "Hannibal F1", "Hermes F1". Kaabashka dambe waa midhaha ugu muhiimsan. Waxaa lagu gartaa cufnaanta ugu sareysa ee madaxyada, caleemaha qaro weyn. Madaxda Kaabashka waxaa loo isticmaali karaa in lagu shaqeeyo lana baabi'iyo cusub.
Waa muhiim! Muujinta kaabajka dabayaaqadii dhammaaday waa mowqifka ugu yar ee walxaha waxyeelada leh - Nitrate, sidaas darteed waa la wada baabbi'in karaa iyada oo aan wax welwel aheyn caafimaadka.
Kaabashka dambe wuxuu leeyahay muddada bislaanshaha ugu dheer - qiyaastii 150 maalmood. Badanaa waqtigaan wuxuu dhacaa xilliga dayrta. Kaabashka noocan oo kale ah ayaa loo kaydiyaa si aad u wanaagsan iyo waqti dheer. Marka la eego xaaladaha kaydinta saxda ah, mudadaasi waxay noqon kartaa ilaa 9 bilood.
Ka mid ah noocyada ugu caansan-Bisaylkiisa ugu caansanaa soo baxaan "Kamenka", "Turquoise Plus", "Khalif", "Sugar Loaf", "White Snow"; Beelaha waxaa ka mid ah Aros F1, Atria F1, Bartolo F1, Extra F1, Lennox F1.
Wax-soo-saarka - waa arrin muhiim u ah xulashada abuurka kaabajka. Breeders ayaa had iyo jeer raadinayay in ay keenaan noocyada ugu wax soo saar badan, sidaa daraadeed ku dhowaad dhammaantood waxay leeyihiin heerar sareeya, taas oo marka la iibsado kororka isbeddel xitaa ka badan. Dabcan, waxsoosaarka la doonayo waxaa la heli karaa oo keliya marka ay jirto xaalad daryeel joogto ah oo habboon ee dhirta: waa shuruudaha codsiga joogtada ah ee Bacriminta iyo dhaymada, taas oo gaar ahaan muhiim u ah Beelaha.
Celceliska dhalidda ee kaabajka ka soo 100 mitir oo laba jibbaaran. mitir:
marka hore bislaada - 400 kg (dhalidda ugu badan ee Beelaha - "Dumas F1", "Tobia F1", noocyada "Juun");
xilliga bartamaha - 600 kg (noocyada ugu caansan - "Glory 1305", "Dobrovodskaya", "Gift", "Merchant"; Beelaha - "Atria F1", "Midor F1", "Megaton F1");
Ma taqaanaa? Kaabashka waxaa iska leh dalagyada qabow u adkaysta, taas oo suurtogal ka dhigaysa in ay koraan xitaa meel ka baxsan Arctic Circle.
wakhtiga qaangaarka dambe - 900kg (dhalidda ugu badan ee Beelaha - "Aggressor F1", "Amager F1", "Valentine F1", "Kolobok F1", noocyada - "Mara", "Snow White").
Waa muhiim! Markaad dooranayso abuur, fiiri baakad: waa inay ku jiraan macluumaadka ku saabsan dhalidda, taas oo ay ku mahadsantahay waxaad dooran doonto abuurka lagama maarmaanka ah.
Iyada oo ku xiran kala duwanaanta, waxay qarsoodi ka badan ama ka yar adkaysi u heer sare. Waa in la ogaadaa in noocyo loo tixgeliyo inay yihiin kuwo u adkeysanaya qabow sida ugu macquulsan, oo ka duwan Beelaha, sidaas darteed, tixgeliyaan arrintan markaad dooranayso abuurka.
Cadaadiska barafku wuxuu kordhiyaa iyadoo ay ku xiran tahay heerka horumarka dhirta. Caleenta geedaha ayaa ah kuwa ugu nugul cagaarka waxayna ku dhiman doonaan -3 ° C.
Sidaa darteed, haddii aad heshay shinni, baakidhka kaas oo lagu tilmaamay in dhirta ay u adkeysan karaan dhaxan hoos u -7 ° C, taasi waxay ka dhigan tahay in horayba u bislaaday, kaabajka baaluqa u dhaqaaqi karo xilliga dayrta si heerkulka hooseeya.
Waxaa habboon in la ogaado in dabaysha goor dambe ay u adkeysan karaan heerkulka sida -10 ° C, iyo dhexdhexaadinta sida hoose u--5 ° C. Noocyada ugu yar ee caabiga udgoon ee kaabajka ah waxaa ka mid ah "Wintering 1474", "Geneva", "Aros". Bacriminta looma tixgeliyo inay u adkaystaan ​​heerkulka hooseeya.
Badanaa marmarsiiyadu waxay jajabaan ka hor qaangaadhka, taas oo si weyn u yaraynaysa muddada kaydinta, sida fungi iyo fayraska si deg deg ah u horumariyaan jawi qoyan. Si looga hortago xaaladdan oo kale inay dhacdo, noocyo kala duwan oo u adkaysta dillaac ayaa la sameeyey.
Waxaa haboon in la xuso in madaxyada bislaada hore ee kelyaha ay u nugul yihiin dhibaatadaas, haddii ugu yaraan wax yar ka dib goosashada.
Kaabashka xilliga-dhexaadku waa mid aan u nugleyn inuu jabo: ka mid ah noocyada ugu adkaysi u kala duwanaan "Elenovskuyu", "Capital". Jajabinta Beelaha u adkaysta - "Satellite F1", "Hinova F1", "Parel F1".
Bisaylkiisa dambe, haddii aad ilaaliso muddada beeritaanka lagu taliyey, waxaa loo tixgeliyaa kuwa ugu adkaysi u leh dillaac. Midka ugu xasilsan waxaa ka mid ah noocyo "Gift", "Rusinovka", Beelaha "Bingo F1", "Galaxy F1", "Tranz F1".
Gaadiidka waa shey muhiim ah oo lagu dooranayo abuurka, gaar ahaan haddii la qorsheynayo in la koro kaabajka iibka, ama cawska leh beerta waa ku filan tahay, maxaa yeelay kaabajka waa in la qaadaa ka dib goosashada. Gaadiidka ugu wanaagsan waxaa leh hantida goor dambe; wanaagsan - Bisaylkiisa dhexe; xun - hore u bislaaday.
Noocyada leh qaabka ugu wanaagsan ee sifooyinka hoos loo eego waxaa ka mid ah "Stone Stone", "Gift", "Yaroslavna", "Tyurix", "Kharkiv Winter", "Snow White", "Belorusskaya 455", "Biryuzu". Beelaha ku jira gaadiidka wanaagsan waxaa ka mid ah "Atria F1", "Latima F1", "Dawn F1", "Transfer F1", "Kazachok F1".
Nolosha khafiifka ah ee kaabajka waxay ku xiran tahay in noocyo iyo Beeluhu leeyihiin tayada ilaalinta wanaagsan. Madaxda leh muddada dheer ee keydinta waxay ku yar yihiin casiir leh, oo ay ku jiraan badan oo fiber, cufnaanta cufan iyo weyn. Noocyada dabacsan ee dhirta badiyaa waxay leeyihiin sifooyinka noocaas ah. Sidoo kale, nolol shelf ayaa ku xiran xaaladaha sii kordhaya, goosashada wakhtiga ku habboon iyo xaaladaha ay dalaggu ku kaydsan yihiin. Kaabashka ugu horeeya ee bisil lama kaydin karo in ka badan 1 bilood, marka hoggaamiye lama kala soocayo.
Cabbirada xilliga-dhexe waxay socon kartaa ugu badnaan 4 bilood: "Madaxa sonkorta", "Gift", "Nadezhda", "Belorusskaya 455" waxaa loo gudbin karaa noocyada leh tayada ilaalinta ugu fiican; si ay u kala saaraan - "Krautman F1", "Tobia F1", "Hermes F1".
Maraqa danbe ayaa lagu kaydiyaa inta badan - illaa 9 bilood. Noocyada soo socda ayaa loo saari karaa iyaga: Maqaalka Late 15, Winter Winter 1474, Amager 611, Geneva, Amager, Krümon, iyo Turkiz. Bacriminta leh nafta ugu badan ee shelf: "Prestige F1", "Atria F1", "Aros F1", "Extra F1", "Lennox F1".
Sida aad ogtahay, kaabash waxaa badanaa la kulmaa cudurada iyo cayayaanka oo keena caajis, dillaac, qashin oo madax ah.
Cudurada ugu caamsan waa:
Waxay kaa caawinaysaa inaad akhrido sida loo daweeyo loogana hortago cudurrada kaabajka.
Waa muhiim! Marka xulashada abuurka, fiiro u yeelo macluumaadka ku saabsan iska-caabbinta kala duwanaanta ama faleebaha ee cudurada kor ku xusan iyo cayayaanka.
Cayayaanka ugu weyn ee kaabajka waxaa ka mid ah:
Thanks to xulashada iyo taranta noocyo cusub iyo Beelaha cusub, cusub, aad u adkaysata cudurada iyo cayayaanka la sameeyay, kuwaas oo si weyn u hagaajin tayada dalagga iyo muddada kaydinta.
Beelaha ugu xasilsan waxaa ka mid ah "Kolobok F1", "Kazachok F1", "Tobia F1", "Glory 1305", "Atria F1", "Krautman F1", "Megaton F1". Noocyada iska-caabinta waxaa ka mid ah "Tradeswoman", "White Snow", "Dobrovodskaya", "Gift".
Waraaqaha xaqiijinaya tayada miraha waa inay ku jiraan dukaanka halkaasoo lagu iibiyo. Kala duwan kasta ama geedka ayaa leh shahaadada tayada gaarka ah, taas oo caddaynaysa in farcankan loo soo saaray si gooni u goosan iyada oo loo hoggaansamayo nadiifinta kala duwan iyo sifooyinka kala duwan ee dhirta daaqsinka ah, waxaana sidoo kale lagu tijaabiyay lana kulmaa dhammaan sifooyinka noocyada kala duwan ee la sheegay.
Iibso kaliya sheyga shahaadada leh - kani waa dammaanad aan laguu iibin doonin noocyo cusub oo been abuur ah ama shaki ku jiro. Sidaas awgeed, doorashada miraha kaabajka ayaa lagama maarmaan u ah sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah haddii aad qorshaynayso inaad hesho dalag weyn oo tayo sare leh oo la keydiyo muddo dheer.
Si loo hubiyo in nidaamka xulashada maaddada abuurtu ay tahay mid deg deg ah oo hufan, u fiirso shuruudaha xulashada muhiimka ah, kuwaas oo si faahfaahsan loogu qeexay qodobkan.